ကျနော်တို့ကုန်ထုတ်လုပ်မှု RFID ရန်ကျူးလွန် Are & သင်၏လုပ်ငန်းသည် IoT ထုတ်ကုန်များ!
SeabreezeRFID, LTD ရေဒီယိုကြိမ်နှုန်းသတ်မှတ်ခြင်း၏ပြီးပြည့်စုံသောထုတ်လုပ်မှုလိုင်းရှိ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်ကနေချစ်ပ်အမျိုးမျိုးဆံ့ အနိမ့်အကြိမ်ရေ, ကြိမ်နှုန်းမြင့် နှင့် Ultra-မြင့်မားသောကြိမ်နှုန်း. ထို့အပြင်သင့်ရဲ့သီးသန့်စိတ်ကူးများနှင့်လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းဖို့စိတ်ကြိုက်ဝန်ဆောင်မှုများကိုပူဇော်နိုင်သလား.
ကျနော်တို့ရှန်ကျန်းအတွက် RFID ထုတ်ကုန်များတဲ့ professional ထုတ်လုပ်သူများမှာ, ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်အားလုံး RFID ကတ်များပါဝင်သည်, တံဆိပ်များ, အင်းလေး, စတစ်ကာများ, ဟာ့ဒ်ဝဲ, access ကိုထိန်းချုပ်အပါအဝင်ပစ္စည်းကိရိယာများထုတ်လုပ်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုဖတ်ပါနှင့်စာရေး, ဆော့ဖျဝဲဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် RFID လျှောက်လွှာစီမံကိန်းကိုဖြေရှင်းချက်.
တိုင်း client ကိုထူးခြားတဲ့ဖြစ်ပါသည်, တိုင်းခွအေနကေိုကွဲပြားခြားနားသည်. အလေ့အကျင့်အကြောင်းပြချက်စာရေးဘို့ SeabreezeRFID မှဖွင့်. ဒါပေမဲ့, အများဆုံးကိစ္စများတွင်, ကတစ်ခုတည်းစကားလုံးမှဆင်း distills: ယုံကြည်ကိုးစားပါ. ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်များနှင့်ဖြေရှင်းနည်းများကိုးစား, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရလဒ်တွေကိုကိုးစား. သင့်ရဲ့အဖွဲ့အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးနှင့်သင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအောင်မြင်မှုရဲ့တစ်ဦးပံ့ပိုးအဖြစ် SeabreezeRFID ရွေးချယုံကြည်မှုတစ်ခုသိသိသာသာမဲဖြစ်ပါသည်. ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်လျှောက်ထားရန်ကျေနပ်လိမ့်မယ်, ဖြေရှင်းချက်နဲ့ရလဒ်တွေကိုသင့်ကိုယ်စားနှင့်သင့်ယုံကြည်မှုရဖို့င့်ဖို့ Start.
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိက SERVICE ကို
SeabreezeRFID RFID & IoT စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်တစ်ခုကျယ်ပြန့်များအတွက်အတွေ့အကြုံနှင့်ပြည့်စုံသောအကူအညီကိုကမ်းလှမ်း, နှင့် RFID မူရင်းထုတ်ကုန်များနှင့်စီမံကိန်းအတွက်လျှောက်လွှာဖြေရှင်းချက်မသာ, ပိုမိုမြန်ဆန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့သင့်လုပ်ငန်းမြှင့်တင်ရန်နှင့်သင့်ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ရောက်ရှိဖို့အထူးသဖြင့်အမြင့်ဆုံးတန်ဖိုးကဆက်ပြောသည်ထုတ်ကုန်.
ကျနော်တို့ထောက်: အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အရည်အသွေးကို, စျေးနှုန်းအားသာချက်, ပြီးပြည့်စုံသောဝန်ဆောင်မှု, တိပေးပို့နိယာမ, ကုန်သည်များနှင့်အဆုံးသည်အသုံးပြုသူများအားကူညီရန်, စျေးကွက်ထိုးဖောက်, ထုတ်ကုန်မြှင့်တင်ရန်, အပြည့်အဝ OEM & လိမ္မော်ရောင်နိုင်, သင့်ရဲ့စိုးရိမ်ပူပန်ဖျက်သိမ်းရေး. အဆိုပါပရော်ဖက်ရှင်နယ်န်ဆောင်မှု SeabreezeRFID ကမ်းလှမ်းမှုမှာကြည့်ဖူး, နှင့်ရဲ့စကားပြောပါစေ.
Polycarbonate ပစ္စည်း Card ကို, PC ကွန်ပျူတာပစ္စည်းအမြင့်အပူချိန်ကိုခံနိုင်ရည် RFID Card ကို
Long ကအဝေးသင် 125KHz + 13.56MHz Dual-ကြိမ်နှုန်း Card ကို, Long က Range EM4200 + FM11RF08 Composite Chip ကဒ်
ultra-ပါးလွှာစတစ်ကာများ Anti-သတ္တုလှိုင်းနှုန်းသည် UHF Tag ကို, ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ပရင့်ထုတ်ရန်အ Anti-သတ္တုလှိုင်းနှုန်းသည် UHF စတစ်ကာများ Tag ကို, ပရင့်ထုတ်ရန်အ Anti-သတ္တုတံဆိပ်တပ်ရန်
ISO ကို 15693 ပရိုတိုကော RFID Chip ကဒ်, မြင့်မားသောကြိမ်နှုန်း Long ကအဝေးသင်စမတ်ကဒ်
လက်ကိုင် Long ကအဝေးသင်တိရိစ္ဆာန် ID ကို Tag ကို Reader ကို, 134.2kHz, ISO11784 / 11785, FDX-B က
J2D081 ဂျာဗားအဖြူရောင်ကဒ်, J2D081 ဂျာဗားကတ် 80KB
PETG ပစ္စည်း RFID Card ကို, PETG ပစ္စည်း ID ကိုကတ်
RFID Crystal Epoxy Access ကိုထိန်းချုပ်ရေး Keychain, RFID Crystal Epoxy စမတ်လက်စွပ်
» ISO 18000-6C အမှတ်အသားများနှင့် ISO 18000-6B အမှတ်အသားများအကြားကွာခြားချက်
» JCOP4 စီးရီး JAVA ကဒ်များကောင်းကျိုးများ (J2R110|J3R110|J2R150|J3R150|J3R180) အီလက်ထရောနစ် ID ကိုကတ်များ၏လယ်ပြင်တွင်
» RFID frequency နဲ့ Transmission ပါဝါ
» ဥရောပဗဟိုဘဏ်မိတ်ဆက်အကြံပြုချက်များ, စွပ်စွဲဂယက်ထလက်ငင်းငွေပေးချေမှုရမည့်ဝန်ဆောင်မှု
» NFC ကိုငွေပေးချေမှုကိုထောကျပံ့, ချစ်ပ်များနှင့်တံဆိပ်ထုတ်လုပ်သူကိုတိုက်ရိုက်အကျိုးခံစားခွင့်
» 10-နည်းနည်းနံပါတ်ထို Access ကိုထိန်းချုပ်ရေးကတ်၏ 8-bit နဲ့နံပါတ်ကူးပြောင်းခြင်းဆက်ဆံရေး